Ny fampidirana an'i Zeevou miaraka amin'i Google Sheet amin'ny alàlan'ny Zapier
Google Sheets & Zeevou Integration
Ankehitriny azonao ampifandraisina amin'i Zeevou ireo Google Sheets marobe amin'ny alàlan'ny Zapier, ny fahafahan'ny zavatra azonao atao dia tsy misy farany. Mamorona Zap fotsiny hampifandray ny Zeevou sy Google Sheets, ary avy eo afaka mamorona sy manavao lisitra ho azy ianao, manangana tabilao, mampiasa sivana, sns, mba hamakafaka kokoa ny zava-drehetra. Alefaso amin'ny data analytics ny angona ilaina ary alaivo sary an-tsaina izany amin'ny alàlan'ny fitaovana toa ny Google Data Studio. Amin'izany dia azonao atao ny mamantatra ny lamina sy ny fifandraisana misy eo amin'ny angona samihafa, ny fanovana sy ny fanatsarana ny paikadin'ny orinasanao.
Manaova lisitra sy tabilao mandeha ho azy
Alao sary an-tsaina sy hadihadio ny angona
Raiso amin'ny ambaratonga manaraka ny paikadim-barotra sy varotrao
misoratra anarana amin'ny Google Sheets